Madaxweyne Deni oo aqbalay in uu booqdo magaalada Muqdisho - Tilmaan Media
Wararka ka imanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu aqbalay inuu Muqdisho yimaad uuna la kulmo madaxda ugu sareysa dowlada federalka.
Go’aankan cusub ee uu qaatay Madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib markii uu kulan la yeeshay wafdigii ka socday dowlada federalka ee ka qeybgalay shirweynihii Puntland ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe.
Xubnaha wafdiga ka socday dowlada federalka oo uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibbada Axmed Ciise Cawad ayaa cadaadis xoog leh saaray Madaxweynaha Puntland Saciid Deni inuu wax ka bedelo mowqifkiisii hore.
Booqashada uu Deni ku imanayo magaalada Muqdisho ayaan la shaacin xilliga y dhacayso hase yeeshee waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in maalmaha soo socdo uu imanayo magaalada Muqdisho Saciid Deni.
Sidoo kale,Madaxweynaha Puntland ayaa oggolaaday in labo qodon laga bedelo Warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka magaalada Garowe.
Wasiirka Caafimaadka oo xaqiijisay qofkii u horeeyay Soomaali laga helay Coronavirus